ललितपुरका सबै उम्मेद्वारले आफैलाई मत... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
बिहिबार, मंसिर ६, २०७५
ललितपुरका सबै उम्मेद्वारले आफैलाई मत हाले
सेतोपाटी संवाददाता ललितपुर, मंसिर २१
ललितपुर जिल्लामा ठूला दलका सबै उम्मेदवारले आफूलाई भोट हालेका छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारको मतदाता नामावलीमा नाम आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमै भएको (प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा) हुँदा आफैँलाई भोट हाल्न पाएका हुन्।
दोस्रो संविधानसभामा आफैंलाई भोट हाल्न नपाउनेमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार अर्थराज्यमन्त्री उदय शमशेर राणाले यस पटक भने आफूलाई भोट हालेका हुन्। उनले बिहान बाग्मती गाउँपालिकामा पर्ने घुसेलको घुसेल माध्यमिक विद्यालय केन्द्रमा मतदान गरे। उनले यसअघि कुपण्डोलमा मतदान गर्दै आएका थिए।
वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व डिआइजी नवराज सिलवालले गोदावरी नगरपालिका–३ मा रहेको किटिनी उच्च माध्यमिक केन्द्रमा बिहान ७ बजे मतदान गरे। क्षेत्र नं ३ का दुई उम्मेदवारले एकै मतदानस्थलबाट मतदान गरे। नेकपा (माओवादी केन्द्र)की प्रवक्तासमेत रहेकी क्षेत्र नं ३ की वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार पम्फा भुसाल र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मदनबहादुर अमात्यले राजतीर्थ (सामुदायिक भवन) बाट मतदान गर्नुरे।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ का कांग्रेस उम्मेदवार चन्द्र महर्जनले ललितपुर महानगरपालिका–४ मा रहेको भोलाढोका केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार कृष्णलाल महर्जनले च्यासलको श्रमिक शान्ति उच्च माविबाट मतदान गरेका छन्।
प्रेशसभातर्फ, क्षेत्र नं १ क का कांग्रेस उम्मेदवार मीनकृष्ण महर्जनले चापागाउँको बज्रबाराही उच्च मावि केन्द्रबाट र एमालेका उम्मेदवार चेतनाथ सञ्जेलले चापागाउँकै वाणी विलास उच्च माविबाट मतदान गरेका छन्। प्रदेश ख मा ऋषि घिमिरेले चन्दनपुरको कालेश्वरी माविमा र माओवादी केन्द्रकी लालकुमारी पुनले भारदेउको कालेश्वरी उच्च माविमा मतदान गरे।
[caption id="attachment_111704" align="alignnone" width="826"] तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी[/caption]
क्षेत्र नं २ क र ख का उम्मेदवार पवनविक्रम थापाले इमाडोलको महेन्द्रग्राम मावि र प्रेमकृष्ण महर्जनले मङ्काखल मतदान गरे। एमालेका प्रदेशका उम्मेदवार माधव पौडेलले लामाटार वडा कार्यालय र ज्ञानेन्द्र शाक्यले महापालको बुबहालमा मतदान गरेका थिए।
प्रदेशसभा ३(क) मा काँग्रेसका नवराज महतले नखिपोटको खेल मैदान र शिवराम महर्जनले भैँसेपाटीको जनउदय माविमा मतदान गरे। प्रदेशसभाका उम्मेदवार एमालेका जीवन खड्काले भैँसेपाटीको महिला भवन र माओवादी केन्द्रका राजकाजी महर्जनले सुनाकोठी वडा कार्यालयमा मतदान गरे। जिल्लामा तीन प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ४७ जनाको र छ प्रदेशसभा सदस्यका लागि ६३ जनाको उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।
यसैबीच काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विवेकशील साझा पार्टीका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्रले भैसेपाटीको महिला भवनबाट मतदान गरे।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर २१, २०७४, १०:११:४४
टी टेन लिगमा सन्दिपको उत्कृष्ट प्रदर्शन, २ ओभर १७ रन ३ विकेट
कसले बनाउँदै छन् सडकका भित्तामा रंगीन चित्र?
‘मन मगन’ हिन्दीपछि अब अंग्रेजी र स्पेनिसमा
हतियारधारी खोज्दाखोज्दै दुहबीमा फिदा हुसेनको हत्या
खाजा बन्द, विद्यार्थी गायब
प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई भने- कमा र फुलस्टप देखाएर काम नरोक्नुस्
केन्द्रीय समिति बैठक माग्दै नेकपाका यूवा नेताले बुझाए ज्ञापनपत्र
संस्कृतका प्रमाणपत्र पेश गरेर प्राधिकरणको फोरमेन बनेकी शर्मालाई भ्रष्टाचार मुद्दा
इन्टरपोलको अध्यक्षमा रूसी उम्मेदवारलाई हराएर दक्षिण कोरियाका किम निर्वाचित
निर्मलाका बुवाआमालाई भेटेर गगन थापाले भने - तपाईंहरूको सन्देश प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्‍याउँछु
राष्ट्रपतिज्यू, गणतन्त्रलाई यति विलासी नबनाइदिनुस् सरगम भट्टराई
छोटा लुगा र बलात्कारको सम्बन्ध जीवन क्षेत्री
भ्यू टावरे विकास! सञ्जीव पोखरेल
बहुउपयोगी जमराको जुस डा. अच्युत अधिकारी
तथ्य र तथ्याङ्कमा पर्यटन सूर्य थपलिया
सबैको जीवनबाट रक्सी निकालेर हेर्ने मन छ मिलन अाचार्य
शून्यता विवेक कट्टेल
भ्यू टावर रवीन्द्र मिश्र
अहँ, तिमी एक्लै नआऊ सरोजा सिग्देल